Ọnọdụ nke Ịkpata ego More Commission Dị ka ihe Insurance Nnọchiteanya Ukwu
Bhose July 7, 2016 Na-apụta, General Enweghị asịsa
-Aghọ ihe mkpuchi gị n'ụlọnga ma ọ bụ nwoke na-ere bụ nnọọ mfe na nnọọ ọrụ na-enye ma ọ bụrụ na ị chọghị itinye mgbalị chọrọ irite ọkpụrụkpụ ego na azụmahịa. E wezụga mmanụ na gas ụlọ ọrụ, ego na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ, na Telecommunication ụlọ ọrụ, mkpuchi oru bụ otu ebe ị pụrụ ime ka ezi ego dị ka ihe mkpuchi gị n'ụlọnga / nwoke na-ere ma ọ bụ ụlọọrụ gị n'ụlọnga.
Ịma aka ndị dị n'ịbụ ihe mkpuchi gị n'ụlọnga
The Nnukwu ihe ịma aka na ịbụ ihe mkpuchi gị n'ụlọnga bụ na ọ bụ a ahịa ọrụ. Gaa na atụmanya maka ahịa ndị nwere ike ghara inwe mmasị n'ihe i nwere na-ere - insurance cover. Ọtụtụ ná ndị mmadụ nwere obi abụọ banyere mkpuchi mkpuchi na ha na-ele ya a wayo, na a skeptism-emekọ mkpuchi ere. Kasị mkpuchi elekọta mmadụ nwere na-eme ka oyi oku site ịkụ aka n'ọnụ ụzọ na-eru nso ndị mmadụ n'ebe nile; ha ukwuu n'ime nweta "ọ dịghị" maka azịza kama a "ee,".
Ọ bụghị n'ihi na ha nāda # mbà obi, ị ga-enwe ike afo mkparị na rejections ma ọ bụ ndibiat na ọtụtụ egbughị nkọwa iji na-akpata paycheck na ọrụ na njedebe nke ọnwa. Ịma aka ọzọ bụ na gị na a pụrụ ịtụ anya ka n'ahịa ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ - ya na eziokwu-gwara, ọ kasị mma na-amalite na ha na-a foothold nke otú e si eme ndị na-azụ ahịa.
Insurance Agents na otú ha ọrụ na-ọrụ Mkpa Gị
Gịnị bụ iru eru nke ihe mkpuchi gị n'ụlọnga?
The ezi ihe banyere ịbụ ihe mkpuchi gị n'ụlọnga bụ na unu adịghị mkpa na-professionally ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ruru eru ịbụ ndị otu. Onye ọ bụla aghọọ ihe mkpuchi gị n'ụlọnga. Kasị mkpuchi mmadụ adịghị ihe ọ bụla ịga akwụkwọ. Ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ ịnshọransị nwere ike ịrịọ maka achọ ịbata na-agụsị akwụkwọ, ma ọtụtụ ihe ịga nke ọma mkpuchi mmadụ bụ naanị mahadum ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ dị elu na-agụsị akwụkwọ.
Ihe bụ isi eziokwu bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ịnshọransị nwere esịtidem ọzụzụ omume n'ihi ikike mmadụ ha jiri dị ka salespeople. Ọ dịghị mkpa ma ị bụ onye gara mahadum ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị dropout, ma ọ bụ nwere ahịa ahụmahụ na ndị ọzọ ụlọ ọrụ ịnshọransị - ị ka ga na-azụ ya ọhụrụ gị na-arụrụ ọrụ tupu ị na-arụrụ ọrụ ma ọ bụ zitere pụọ banye n'ọhịa. Ọ bụrụ na ị na-na US, ị nwere ike a chọrọ ruo ala ule ma na-nwetara ikike tupu ị na-eme dị ka ihe mkpuchi gị n'ụlọnga.
The naanị àgwà na ikike na-ewe mmadụ n'ọrụ chọrọ ịhụ na ị, na nke ị n'ezie mkpa ịga nke ọma na gị ọrụ na-: a mma spirit, ihe ekwurekwu àgwà, -enwe ike ịnagide rejections na kwenye ndị, a tenacious spirit, na ihe mmuo maka pitching na mmechi ahịa amụọ. Mgbe i nwere àgwà ndị na ị na oké ọchịchọ na-aga nke ọma ma na-egosi ihe ịrịba ama nke na-adọrọ ọzụzụ ihe, mgbe ahụ n'ọrụ ga-atụle asambodo i tupu ego ị.
Olee ihe mkpuchi mmadụ irite?
Na mbụ, ọ ga-kwuru na mkpuchi mmadụ n'ụzọ dị ukwuu ugwo Ụlọrụ na-adịghị ụgwọ ọnwa. A arụsi ọrụ ike na mkpuchi nwoke na-ere ga-irite ihe na Ụlọrụ karịa na ụgwọ ọnwa, na nke a bụ kachasi mkpa nke ọrụ. The ego ị na-akpata na-adabere na gị obodo ma ọ bụ mba, na set pasent nke gị ọrụ kwa ahịa ị merie, na otú ị na-enwe ike iji merie ọhụrụ ahịa kwa izu ma ọ bụ ọnwa. Edi ke United States, a-arụsi ọrụ mkpuchi gị n'ụlọnga akpata nkezi nke $ 100K kwa afọ, na nke ahụ bụ ihe.
E wezụga Ụlọrụ, ụfọdụ mmadụ na-na-isi ụgwọ ọnwa na-ha na-aga. Ọ dịkwa ike irite ego consultancy ọrụ ebe gị n'ụlọnga na-enyere ndị ahịa na ego atụmatụ na ọrụ na ndụmọdụ. Ike ndị a ebubo ịga a ogologo ụzọ na-enyere ndị gị n'ụlọnga iji gboo mkpa ya mgbe n'igbo mkpa nke ma ndị ahịa na-ewe mmadụ n'ọrụ.
Njem Insurance: Why You Must Have ...
Site Bhose Ka 25, 2013
Ihe Ndị Na-Mmetụta ezighị On Your ...
Site Bhose March 20, 2013
Olee otú iji zọpụta ego si Insurance ...
Site Bhose March 18, 2013